Feature စုံ၊ မြန်နှုန်းမြင့်တဲ့ web browser အသစ် Vivaldi – DigitalTimes.com.mm
0 Shares 92 Views
Feature စုံ၊ မြန်နှုန်းမြင့်တဲ့ web browser အသစ် Vivaldi
Ye Wint Apr 08, 2016
Feature တွေ အစုံအလင်ပါရှိပြီး၊ မြန်နှုန်းမြင့်တဲ့ browser ကို သုံးချင်သူတွေအတွက် Vivaldi ဆိုတဲ့ web browser အသစ်တစ်ခု ထွက်ပေါ်လာပါပြီ။
Vivaldi browser ဟာ Opera CEO ဟောင်းဖြစ်သူကိုယ်တိုင် ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ broweser အသစ် ဖြစ်ပြီး၊ browser ကို ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ချင်သူ user တွေနဲ့ မြန်နှုန်းမြင့်တာကိုမှ သဘောကျတဲ့သူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
၁၄ လကြာ beta ဗားရှင်းအနေနဲ့ ထွက်ရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာ၊ မနေ့က Vivaldi browser v1.0 စတင်ထွက်ရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Vivaldi ဟာ Chrome browser မှာ အသုံးပြုထားတဲ့ Blink rendering အင်ဂျင်နဲ့ပဲ လည်ပတ်တာဖြစ်ပြီး၊ Chrome အတွက် ဒီဇိုင်းဆွဲထားတဲ့ extension တွေကို Vivaldi မှာလည်း install လုပ်သုံးလို့ရပါတယ်။ Vivaldi ရဲ့ မူလရှာဖွေရေးအင်ဂျင်က Microsoft ရဲ့ Bing အင်ဂျင်ဖြစ်ပြီး၊ browser မှာ လူကြည့်များတဲ့ website တွေကို တပါတည်း bookmark လုပ်ပေးထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
“ ဒီလို bookmark တွေ လုပ်ပေးထားပေမယ့် ကျနော်တို့ အကျိုးအမြတ်မယူထားပါဘူး။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ search အင်ဂျင်ကို ပြန်ပြောင်းနိုင်သလို၊ ကျနော်တို့ ထည့်ပေးထားတဲ့ bookmark တွေကိုလည်း အလွယ်ဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်” လို့ von Tetzchner က ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
Vivaldi ဘရောက်ဆာရဲ့ ဖန်ရှင်တွေကတော့ လက်ရှိဖွင့််ထားတဲ့ website tab တွေအကုန်လုံးကို နောက်ပိုင်းပြန်ကြည့်ဖို့အတွက် ဆက်ရှင် save လုပ်နိုင်တာ၊ ‘Web Panels’ လို့ ခေါ်တဲ့ website တစ်ခုဖွင့်ထားတုန်း တခြား ဆိုက်တစ်ခုကို side view အနေနဲ့ သုံးနိုင်တာ၊ ကိုယ်အရင်ဆုံးဖွင့်ထားတဲ့ page ကို super Back ခလုတ်နဲ့ ချက်ချင်းပြန်သွားနိုင်တာစတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေ မျိုးစုံပါဝင်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာ Vivaldi ဘရောက်ဆာကို Windows ၊ OS X ၊ Linux တို့မှာ သုံးစွဲနိုင်ကာ၊ မိုဘိုင်းအတွက်လည်း လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Ref: The Verge
Superman ကိုယ်တိုင်မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ Huawei P9 စမတ်ဖုန်း
အမေရိကရဲ့ ပထမဆုံး အာကာသယာဉ်မှူး ၇ ယောက် ‘Mercury Seven’
1 shares0 views
Notch မပါ ဘောင်မဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့မူပိုင်ခွင့်တင်ထားတဲ့ Samsung Galaxy ဖုန်းအသစ်
Nwe Oo - Jun 23, 2018
[Zawgyi] Infinity Display ဖြစ်ဖို့ အပြိုင်အဆိုင်ကြိုးစားနေကြချိန်မှာ နောက်ထပ်ထပ်ထွက်လာမယ့် Screen ကြီးကြီးဖုန်းက ဘာဖြစ်နိုင်မလဲ?? Samsung ကတော့ ဘာခလုတ်မှမပါ၊ ဘောင်မပါ၊ နားကြပ်ပေါက်မပါ လုံးဝ မျက်နှာပြင်ပြည့်ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ Concept ဒီဇိုင်းတစ်ခုကို မူပိုင်ခွင့်တင်လိုက်ပါပြီ။ မျက်နှာပြင်ပြည့်ဆိုတော့ ထိပ်ဖက် Notch ပါလာမလားစိုးရိမ်နေတဲ့သူတွေအတွက်တော့…
New XPS 13 Laptop ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Dell
Tha Ra - Jun 23, 2018
[Zawgyi] Dell Myanmar အနေနဲ့ New XPS 13 Laptop ကို ရန်ကုန်မြို့မှာ မိတ်ဆက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ New XPS 13 Laptop ဟာဆိုရင် InfinityEdge 4K Display တွေကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် တောက်ပကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့…
826 shares198 views
တန်ဖိုး အနည်းဆုံး Flagship စမတ်ဖုန်း (သို့မဟုတ်) Mi 8
Tha Ra - Jun 22, 2018
[Zawgyi] ၅သိန်း ဝန်းကျင်ထဲက Mid-range စမတ်ဖုန်း တစ်လုံးလောက် ဝယ်ဖို့ စဉ်းစားနေတာလား ? မဝယ်သေးပါနဲ့။ ၁သိန်းခွဲလောက် ထပ်စိုက်ပြီး Flagship စမတ်ဖုန်းကို ဝယ်ကိုင်လိုက်ပါ။ ကိုယ့်မှာ မရှိတော့ရင် သူများဆီက ချေးပြီး ဝယ်လိုက်ပါ။ ပြီးမှ ပြန်ဆပ်ချင်ဆပ် မဆပ်ချင်နေပေါ့။…
227 shares72 views
iPhone အတွက် အကောင်းဆုံး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး App များ
Ko Thuya - Jun 22, 2018
69 shares41 views
TGIF ကို တစ်ယောက်တည်းပျော်ပျော်ကြီးဖြတ်သန်းမယ်ဆိုရင်?
Nwe Oo - Jun 22, 2018
Android, HUBS, LG
259 shares82 views
၆.၂ လက်မ မျက်နှာပြင်နဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ် ဘောပင်ပါတဲ့ LG Stylo4ကို မိတ်ဆက်ပြီ
534 shares155 views
Xiaomi က Redmi6Pro ရဲ့ ဓါတ်ပုံများကို တရားဝင် ပြလိုက်ပြီ